सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्दा राम्रो हुन्छ कि नराम्रो ? हेर्नुहोस् भिडियो – Online Palanchok
सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्दा राम्रो हुन्छ कि नराम्रो ? हेर्नुहोस् भिडियो
सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्दा शुभ हुन्छ या अशुभ भन्ने उत्सुकता छ भने यो भिडियो हेर्नुहोस्। सपना देख्नु स्वभाविक हो। कति राम्रा देखिन्छन त कति नराम्रा सपना देखिन्छन र सबै पना पुरा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। हामीले देख्ने प्राय सपना पूरा हुँदैनन्। तर कहिलेकाहीँ हामीले देखेको पनि विपनासँग पनि जोडिएका हुन्छन्। हामीले देख्ने सपनाको दैनिक जीवनमा शुभ अशुभ संकेत गर्छ भन्ने जनविश्वास छ। सपनाले भविष्यमा हुने वाला राम्रो नराम्रो घटनाको बारेमा पहिला नै जानकारी दिन्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ तर हामी ती संकेतलाई बुझ्न सक्दैनौ । सपनाको संसार ज्यादै नै रोचक हुन्छ ।
यहाँ हामीले सपनामा आफूले विवाह गरेको देख्दा ज्योतिष शास्त्र अनुसार शुभ अशुभ के संकेत गर्छ भन्ने विषयमा यस भिडियोमा उल्लेख गरेका छौँ।
यदि कोही व्यक्तिले सपनामा आफ्नो विवाह भएको वा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुनै बस्तु देख्दछ भने त्यसको शुभ र अशुभ दुबै अर्थ हुन्छ। सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्नुभयो अथवा साथी नातेदार कसैसँगको विवाह देख्नुभयो भने त्यो सपनालाई शुभ संकेत मानिदैन। त्यो पिना देख्दा तपाईँको काममा कुनै पनि बाधाको संकेत दिन्छ।
यदि तपाईंले कोही महिलाको विवाह हुँदै गरेको देख्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि शुभ संकेत हुने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तो सपना देखे तपाईँको जीवनमा छिटै खुशी आउनेछ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। भप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस्।
Prevबिहेको दिनकै भोलीपल्ट कृष्णको २ हात र १ खुट्टा काटियो ! रुपालाई आफन्तले अर्कैसँग बिहे गरेर जा भन्छन्
Nextपोखरा बाट आयो सबैलाइ चकीत पार्ने खबर ( सक्दो येयर गरौ
पृथ्वीनारायणको शालिक अगाडि रातो टालोमा उभ्याएर राष्ट्रपतिलाई सलामी
सार्वजनिक यातायातको अश्लील भाइरल भिडियोबारे बोल्यो प्रहरी (विज्ञप्ति)
सुरक्षा माग्दै काठमाडौं आए बम दिदीबहिनी : ‘हामी जिउँदो निर्मला हौं तर, कसले न्याय दिन्छ ?’
डाक्टरले ‘धेरै दिन बाँच्दिनस्’ भने पछि १२ वर्षको उमेरमा परिवार त्यागेर हिडेकी अञ्जु बनिन् सयौं बेसहाराहरुको सहारा
१० घण्टापछि यसरी समातिए १४ बर्षीय बालकको हत्यारा (भिडियो)
चारतारे होटेलमा यसरी भयो बर्षा र संजोगको इन्गेज्मेन्ट (भिडियो)
पहिलोपटक कृशल र सेड्रिना म्युजिक भिडियोमा एकसाथ (भिडियो)
लगनको महिनामै घट्यो सुनको मूल्य
वर्षा राउत यौनकर्मी बनेको फिल्म ‘मेरो पैसा खोई’ युट्युबमा सार्वजनिक (भिडियो)
कृष्ण वलिलाई भेट्दा डाँको छोडेर रोईन्- मेघा घिमिरे… (8)
कृष्ण ओली जस्तै पीडित बुद्धिमानलाइ सहयोग लिएर भेट्न… (4)
काठमाडौँ – नेपाली कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु… (4)
नेपालगञ्ज नाका बन्द गर्ने भारतीयहरुको चेतावनी (3)
आर्थिक अभावका कारण दिदिभाई बने दृष्टिबिहिन (3)
रामबहादुर बमजनले हजारौलाई आश्रमबाट निकाले, सिन्धुली… (3)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा चोभारमा सुक्खा… (3)
चर्चित टेलिभिजन अभिनेत्रीको छतबाट खसेर ज्यान गयो , ६… (3)
© Copyright 2016–2019 Online Palanchok. All rights reserved.